China KLT-8000 emepụta na soplaya |Na-egbuke egbuke
Metal halide/ Manual mast
KLT-8000 usoro ìhè ụlọ elu si Brighter Electromechanical nye vasatail, ala mmezi, inogide na a pụrụ ịdabere na lighting.KLT-8000 usoro ìhè ụlọ elu awade ìhè na ruo 8kw nke mbupụ ike maka jobsite ike mkpa niile na a kọmpat akara ukwu. The ìhè ụlọ elu bụ ihe siri ike. , ihu igwe na-eguzogide na mmetụta na-eguzogide na niile-steel body.It's hundu kpuchie na acid na alkali eguzogide agba na mfe ọcha.
Dabere na ụkpụrụ nke ndị ahịa kacha mkpa, ngwaahịa anyị na-anakwere echiche imewe dị elu.Due ka ọ dị ọhụrụ imewe, ụlọ elu ọkụ na-egosipụta ịdị mma, arụmọrụ, mfe na nchekwa na ọrụ. Ụlọ elu ọkụ bụ obere, kọmpat ma na-ewe obere ohere mgbe a na-ebufe ya. ma ọ bụ echekwara.
Ụlọ elu Diesel Laydown na-egbuke egbuke abụrụla ụlọ elu na-aga ọkụ ihe karịrị afọ 8.N'igosi ụlọ elu telescoping nke dị larịị maka njem dị ala na ebe nchekwa dị elu, ụlọ elu ahụ na-ebili ruo 30 ụkwụ na winches abụọ mgbe ebugara ya.Teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-enye ọkụ dị elu yana nhọrọ nke ọkụ halide metal, LEDs ma ọ bụ ọkụ.Maka nhazi saịtị ngwa ngwa yana obere oge nkwụsịtụ, ihe ọkụ ọkụ ọ bụla nwere ike iji ya mee ihe n'onwe ya na-ejighi ngwá ọrụ-na ihe ndozi ahụ na-anọkwa n'ọnọdụ ozugbo edobere ya.
N'agbanyeghị ihe ọkụ ọkụ gị chọrọ, usoro ụlọ elu ọkụ na-egbuke egbuke KLT-8000 na-enye nhọrọ na ịdịte aka iji nyefee ọkụ na-agbanwe agbanwe, nke a pụrụ ịdabere na ya na saịtị gị.Ụlọ elu 30-ft (9.14 m) gbatịrị elu-elu na-enye 4,000 Watts nke ọkụ ebe nhọrọ 10kW generator na-enye ike dị ukwuu iji rụọ ọrụ na akụrụngwa ndị ọzọ.
●4 x 1000 Watt metal halide oriọna
●Kubota engine na 8 kW generator
●359º ntụgharị ụlọ elu na-adịghị na-aga n'ihu na eriri mast na-atụgharị
●Mast ọrụ dị arọ, chassis na 3,000-lb (1,360 n'arọ) gosiri axle ka ọ na-ejikwa ịdọrọ n'okporo ụzọ siri ike.
●Vertical Mast Option atụmatụ na eletrọnịkị wench maka ntinye ngwa ngwa mast, na-ebuli ọkụ na elu zuru oke na 30 sekọnd.
Akara ukwu etinyegoro 127×112in.(321×288cm), L×W
Ogologo ọrụ Oke.30ft(9.14m)
Ogologo njem 66in (168cm)
Ibu Na-arụ ọrụ ihe dịka.1800lb(815kg)
Shippin Ihe ruru 1550lb(703kg)
Ọkụ 480-watt LEDs 350-watt LED Metal halides
oriọna Ihe ndozi anọ 480W Ihe ndozi 350W anọ oriọna 1000W anọ
Ọcha 57,800lm kwa nhazi 49,000lm kwa nkeji 110,000lm kwa oriọna
ngụkọta 231,200lm ngụkọta 196,000lm ngụkọta 440,000lm
Ụdị njin Tier 4 Diesel ikpeazụ, 3-cylinder, okirikiri 4
Ọsọ injin 1800rpm @ 60Hz ma ọ bụ 1500rpm @ 50Hz
Generator Na-enweghị ahịhịa, klas H
Ọkwa ụda 70dB@23tf(7m) na max.load
Mbupute ike kacha 9,8kw 11.5kw 9,1kw
Nkwagharị 1001cm³ 1123cm³ 1028cm³
Ike tank mmanụ 114L 114L 114L
480-watt LEDs 350-watt LED Metal halides
Oriri mmanụ ụgbọala 1.17 l / h 0.096L / h 1.86 l / h
Ịnye mmanụ n'oge betore Ihe dịka elekere 97 Ihe dịka elekere 120 Ihe dịka elekere 62
Mpụta 6 kW ma ọ bụ 8 kW
Voltaji 120Vac ma ọ bụ 240Vac
Amperage 50A @ 120V, 25A@240V
Ugboro ugboro 60Hz ma ọ bụ 50Hz
Ụkpụrụ voltaji ± 6%, enweghị ibu zuru oke
Nke gara aga: KLT-6500
Osote: KLT-8000 LED
Ụlọ elu ọkụ mberede
Ụlọ elu Lighting China
Ụlọ elu ọkụ Maka Nrụpụta